May 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Khant Phyo Win at 7:56:00 PM 0
Khant Phyo Win at 7:49:00 PM 0
မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တစ်စတစ်စနဲ့ ပျက်စီး
ကိုယ်ပူတဲ့ ညတွေမှာ ဆေးခါးကြီးတွေသောက်
ဒဏ်ရာတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချ
www.techniquehelper.blogger.com at 9:59:00 AM 2
မြန်စာစာ ပြဿနာတွေအတွက် အခက်အခဲ အများအပြားရှိတာကို တွေ့ရပါတယ် တချို့ဖုန်းတွေက root မဖောက်ပဲ မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်လို့ရသလို root ဖောက်ပြီးတော့လည်း မြန်မာစာ မှန်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
ဒီapplication မှာတော့ root အများအပြားထည့်ထား
ပါတယ် မြန်မာစာအတွက် အခြားအရာတွေပါ
ဖုန်းservices သမားများ အထူးဆောင်ထားသင့်
ကျွန်တော်က ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ ဘယ်ဖုန်းက ဘာနဲ့ ဖောက်လိုက်ပါ ဘယ်software သုံးလိုက်ပါ မစမ်းသပ်နိုင်လို့မသိခဲ့ပါဘူး G730 ကို root ဖောက်ချင်ရင်တော့ vroot နဲ့ဖောက်ရခဲ့ပါတယ် ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်ကိုင်လို့ စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ အခြားဖုန်းတွေတော့ မကိုင်လို့မစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ
Khant Phyo Win at 9:46:00 AM 0
Phone Application Root Tools Xiaomi Root
Maung Pauk at 5:21:00 PM 0
Windows 32bit နဲ့ 64 bit တွေမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Xiaomi Mi4i ကို တစ်ချက်တည်း Root နိုင်တဲ့ Root Tool ဖြစ်ပါတယ်.. Win Mobile World အတွက် ကိုသန်းဓန က ရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပြီး အားလုံးသုံးနိုင်အောင် မျှဝေပေးထားပါတယ်..
Windows 32bit နဲ့ 64 bit တှမှော အလုပျလုပျနိုငျပွီး ခုနောကျဆုံးထှကျလာတဲ့ Xiaomi Mi4i ကို တဈခကျြတညျး Root နိုငျတဲ့ Root Tool ဖွဈပါတယျ.. Win Mobile World အတှကျ ကိုသနျးဓန က ရေးသားပေးထားတာဖွဈပွီး အားလုံးသုံးနိုငျအောငျ မြှဝပေေးထားပါတယျ..
Credit to : ThanDaNa
Xiaomi Mi4i Root Tool ( x86 x64 ) : 12.91 Mb
Khant Phyo Win at 12:05:00 AM 0
Khant Phyo Win at 9:27:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:31:00 PM 0
Khant Phyo Win at 2:19:00 PM 0
Khant Phyo Win at 2:15:00 PM 0
www.techniquehelper.blogger.com at 8:54:00 PM 0
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီgame လေးကတော့ ၂၅ရက်နေ့မှ ထွက်ရှိလာသော gmae လေးပါအသစ်စက်စက်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်မြန်မြန်ပဲတင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ
နာမည်က Bombsquad လေးပါ အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့
Khant Phyo Win at 9:25:00 AM 0
Khant Phyo Win at 12:59:00 AM 0
ကိုယ်က မင်းကို ချစ်နေတာလား
Khant Phyo Win at 12:52:00 AM 0
Khant Phyo Win at 9:45:00 AM 0
Khant Phyo Win at 10:15:00 PM 0
ဖုန်းထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်ရူရန် လို့အပ်တဲ့-Adobe Acrobat Reader v15.0.2 Apk နောက်ဆုံး Version
Mr. Win Hlaing at 4:03:00 PM 0
Android ဖုန်း အတွက် Adobe Reader တောင်းဆိုတဲ့ All Friend အတွက်ကျနော်တင်ပေးလိုက်
Min Oaker at 10:29:00 PM 0
ကျနော်လည်း blog လောကနဲ့ ကင်းကွာနေတာ
အလုပ်လည်း သိပ်မအားတာကြောင့် မတင်ဖြစ်တာပါ.
Samsung Glaxy Grand Prime (vir 4.4.4)
ကို root လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ....
အရင်ဆုံး ဖုန်းကိုကွန်ပြူတာနဲ့ မချိတ်ခင်
Setting >> more >> security >> reactivation lock
ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ဖို့ လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့ မရှိရင်မလိုပါဘူး။
setting >> more >> developer >> option >>
usb degubbing ကို ON ဖို့ လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
Setting >> more ထဲမှာ developer option ကို
မတွေ့ရင် setting >> about device ထဲက Buildnumber ကို ၇
ချက်လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ ။ setting >> more ထဲမှာ
developer option ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းဘတ်ထရီ အနဲဆုံး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း သွင်းထားပါ။
ကွန်ပြူတာကနေ Odin ဆော့ဝဲလ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ Pda အကွက်ကို
အမှန်ချစ်ပေးပါ။ ပြီးရင် pda ကိုနှိပ့်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့
ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်" ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပြီး
အသံတိုးတဲ့ခလုတ် ဖုန်းခလယ်ခလုတ်နဲ့ ဖုန်းပါဝါခလုတ်
အဲ့.....ခလုတ် ၃ လုံးကို ပြိုင်တူခဏ နှိပ့်ထားပေးပါ။
Download mode ၀င်တာပြတာနဲ့ အကုန်တပြိုင်ထဲ လွှတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အသံချဲ့တဲ့ခလုတ်ကို တချက်ထပ်နှိပ့်ပြီး
confirm ရင် download mode ready ဖြစ်ပါပြီး။ စက်ရုပ်အစိမ်းရောင်ပုံလေး
ပေါ်နေပါမယ်။ ပြီးရင်ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်လိုက်ပါ။
အဲလိုချိတ်လိုက်လို့ Odin ထဲက ID:COM နေရာမှာ
အရောင်လေးနဲ့ ပြနေရင်ရပါပြီး။ အောက်က Start ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့
သူလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပီးရင် PASS/RESET ပြပီး
ဖုန်းပိတ်သွားပါမယ် ။ ဖုန်းပြန်တတ်လာသောအခါ supersu ကို တွေ့ရပါမယ်...
(မှတ်ချက်။ ။Rootဖောက်နေတုန်း ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်း ဆက်သွယ်ထားသော
Usb ကြိုးမလွတ်သွားစေရန် ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ကွန်ပြူတာအတွက် Odin ဆော့ဝဲလ် Zip ဖိုင်ပါ။ Zip ဖြည်လိုက်ရင် အထဲမှာ Odin ရှိပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာ ကွန်ပြူတာက ဖုန်းကိုမသိရင်
(Odin မှာ ID:COM နေရာမှာ အရောင်မပြလျှင်)
ကွန်ပြူတာက ဖုန်းကိုသိအောင် ကွန်ပြူတာမှာ ထည့်ပေးရမဲ့
Samsung usb driver ပါ။ အောက်မှာ Download ရယူပြီး
ကွန်ပြူတာမှာ Samsung USB driver ကို ကွန်ပျူတာမှာ run ထားပေးပါ....
Download >> https://my.pcloud.com/publink/show?code=mkd
Odin Zip Download >> http://pc.cd/4Ak7
Root_grand_prime_sm-g530h-mohan.zip Download >>
Root Checker Download >> http://pc.cd/rak7
Supersu Apk Download >> http://pc.cd/PNk7
Min Oke Kar (ဘီလူးကျွန်းသားလေး)နည်းပညာ
Maung Pauk at 3:06:00 PM 0
မျိုးကြီး ရဲ့ မင်းရှိတဲ့မြို့ mp3 ဒေါင်းလုတ်လင့် အသစ်နှစ်ခု
ပုသိမ်နည်းပညာ at 9:44:00 PM 0
မျိုးကြီး ရဲ့ မင်းရှိတဲ့မြို့ mp3 ဒေါင်းလုတ်လင့် အသစ်နှစ်ခု ပါ ညနေကတင်ပေးတာ
လင့်ကချက်ချင်းသေသွားတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး ဟက်တာလာဘာလား ဘော်ဒါတွေဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေလို့ လင့် အသစ်2ဖုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Solidfiles in Download
p -Cloud in Download
computerကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် language လေ့လာချင်ရင်
www.techniquehelper.blogger.com at 9:37:00 AM 0
Database Management System ကိုလေ့လာနေတဲ့ language သမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့ mysql software လေးပါ computer မှာ install လုပ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် data တွေကို insert လုပ်မလား delete လုပ်မလား update လုပ်မလား လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ computer ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေအတွက် အထူးအသုံးဝင်တဲ့ software လေးပါ
Android Tool Phone Application Root Tools
Maung Pauk at 12:11:00 AM 1
VRoot 1.8.3.14743 : 16.6 Mb
Root Tool ထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ လူသုံးအများဆုံး VRoot ကတော့ ဗားရှင်းသစ် 1.8.3.14743 ကို 15.5.2015 ရက်နေ့က အသစ်ထပ်မံထုတ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ.. အရင်ဗားရှင်းသစ်မှာ မပါဝင်ခဲ့တဲ့ Feature အသစ်တွေကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ပေးထားပြီး နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Android Version 5.0 နဲ့ 5.0.1 တွေကိုတောင် Root နိုင်လို့ ဆိုပါတယ်.. Service ဆိုင်များ၊ Root ကလိသူများအတွက် ဗားရှင်းသစ်ကို ခုပဲ ရယူနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ..
[ Root Tool ထဲမှာ နာမညျအကွီးဆုံးနဲ့ လူသုံးအမြားဆုံး VRoot ကတော့ ဗားရှငျးသဈ 1.8.3.14743 ကို 15.5.2015 ရကျနကေ့ အသဈထပျမံထုတျပေးလိုကျပွနျပါပွီ.. အရငျဗားရှငျးသဈမှာ မပါဝငျခဲ့တဲ့ Feature အသဈတှကေို ထပျမံပေါငျးထညျ့ပေးထားပွီး နောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ Android Version 5.0 နဲ့ 5.0.1 တှကေိုတောငျ Root နိုငျလို့ ဆိုပါတယျ.. Service ဆိုငျမြား၊ Root ကလိသူမြားအတှကျ ဗားရှငျးသဈကို ခုပဲ ရယူနိုငျအောငျ တငျပေးလိုကျပါပွီ.. ]
www.techniquehelper.blogger.com at 7:26:00 AM 0
window7window XP တင်တဲ့အခါ ခွေနဲ့မတင်ဘဲ sdcard နဲ့တင်ချင်သူများ အတွက် download ဆွဲပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာပေါ့ ခွေနဲ့တင်နေတာ ပျင်းနေသူများအတွက်ပေါ့
Thiha Htike at 8:45:00 PM 0
Thiha Htike at 8:44:00 PM 0
(၅) လူတစ်ယောက်သည် အစားစားရာတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပြုအမှုများနှင့် စားလျှင် သူသည် စိတ်ဖိစီးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) လူတစ်ယောက်သည် အသေးအမွှား ကိစ္စများမှာပင် စိတ်တိုဒေါသ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် သူသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုအပ် နေသောသူဖြစ်ပါတ
မှတ်ချက်။ ။ ဤကဗျာများသည် ၂၁ရာစုများဖြစ်သည်...(15.5.2015)
Thiha Htike at 8:41:00 PM 0
ဟုတ်ကဲ့ သီဟထိုက်၏ ပို့စ်များ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ...
အဲဒါနဲ့ ကဗျာတွေကို ကိုယ်တိုင်တင်ပေးပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားတာမဟုတ်ပါဘူး နောက်ပြီး ရေးသားသူများက တစ်ကယ့်ဝါသနာ ပါပြီး တစ်ကယ်ပါရမီရှိတဲ့သူတွေပါ အဲ့တာကြောင့်ကဗျာရေးသူများကို အောက်တွင် ရေးသူ=မည်သူမည်ဝါ လို့ရေးသားထားပါတယ် မိမိတို့ အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ထိုကဗျာရေးသူ နာမည်ကို Message ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကဗျာဆရာ အား ၀မ်းသာစေမည့်စကားလေးများ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါမည်ခင်ဗျာ...
မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ boy "
လူသားအားလုံး ပျော်ရွှုင်စွာ နေရတယ်ဆိုရင်
ဒါဟာ ကို့ရဲ့အောင်မြင်မူ့တစ်ခုပဲ... "
မာန်ရှိပြီး စိမ်းကားသွားမှာ ကို
စိုးရွံမိပါတယ် မမချောစုရယ် "
" ဟေး.... လိပ်ပြာမင်းသာနားမယ်ဆို
ပျံရုံပဲတော့ မပျံပါနဲ့နော် "
" စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတာ
မြတ်နိုးရမယ် ၊ တန်ဖိုးထား
သဘောထားကြီးရမယ် ၊ အနစ်နာခံနိုင်ရမယ်
သူ့ မျက်နှာအား တဏှာဝဲယက်မှ
မှတ်ချက်။ ။ သိပ်ချစ်ရတဲ့သူက အနားမှာရှိနေပေးရင်
ကိုယ်မင်းကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ကွာ "
" သူ့ကို စွန့်လွှတ်ဖို့လည်း
" ရှင့်ကိုမုန်းတယ် ရင်ထဲကမပါ
" သိပ်သတိရ ညညတွေမျိူး
*သြော်,. အချစ်ရယ် """
ရင်ထဲအတည် ဖြစ်ရပါသည် "
" လွမ်းဆွတ်မိရင်လည်း ငါတစ်ယောက်ထဲ
" နှင်းဆီမွေးမြ ရန်မခအောင်
တစ်ပွင့်ဆီသို့ ဒီမှာဘ၀အသည်းမွကြွေရလေပြီတည်း "
" သမီးငယ်လေး သိပ်ငယ်သေးလှ
သဲရွှေအုံသို့ အချစ်စူးလို့သေတတ်တယ် "
ငါ့မှာ ကာရံတို့က မရှိ
ငါ့မှာ အရောင်တို့က မရှိ "
ဘ၀ဆက်တိုင်း မင်းနဲ့ငါ "
ပြာဖြစ်မှာအမှန်ပဲ ချစ်သူရယ် "
မိဘမေစ်တာချော့၍ တခါ ခြောက်၍ တလှည့်
ဥပဒေအထက်မှာ ငွေရှိသည်။ "
မှတ်ချက်။ ။ ကဗျာများတင်ရန် အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ကျန်သော ကဗျာများကို လည်းတင်ပေးသွားပါမည်။ ။